Izixhobo ezi-5 ezibalulekileyo zokuzisebenzisa kwi-Android Auto | I-Androidsis
Eyonaapps ilungileyo onokuyisebenzisa kwi-Android Auto
I-Android Auto ihambela phambili kwintengiso, nangona ubukho bayo bungabanzi kakhulu. Kodwa kancinci kancinci abavelisi, NjengoToyotaBaza kuyisebenzisa le nkqubo yokusebenza kwiimoto zabo, into eya kuthi ngokuqinisekileyo ibe yinto ebalulekileyo yokunyusa. Ukufumana okuninzi emotweni ngale nguqulo ye-Android, sinenani elikhulu lezicelo.
Ngale ndlela, sinokudibanisa imisebenzi eyongezelelweyo, esinokuthi senze ngayo zonke iintlobo zemisebenzi. Emva koko sikushiya ngokukhetha Izicelo ezibalulekileyo zokufumana okuninzi konke amanqaku asinika wona nge-Android Auto.
5 NYTimes ngeSpanish
Enye yeendlela ezilungileyo zokumamela unomathotholo, enkosi kubukho bezitishi ezingama-100.000 ezivela kwihlabathi liphela ngokufanayo. Wena sithethile ngaphambili Kwesi sicelo esinokuthi sisebenzise ukuthatha ithuba kwi-Android Auto. Zonke izitishi zilungelelaniswe ngokwamacandelo, ke kulula kakhulu ukufumana into esingayithanda kwiapp. Ikwanonxibelelwano oluhle, olwenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa ngalo lonke ixesha.
Ukukhuphela le app simahla. Sinokuthenga kunye nentengiso ngaphakathi kuyo, ukufikelela kwezinye izinto ezongezelelweyo, kodwa akukho mfuneko yokuba sihlawulele ukusetyenziswa kwazo.
Irediyo yeTuneIn: Umculo kunye nerediyo yeFM
Umthuthukisi: TuneIn Inc.
Usenokungafuni ukumamela unomathotholo ngelixa uqhuba, kodwa ufuna ukumamela ibali okanye incwadi oyithandayo. Kule meko, sinokubhenela kwizicelo zencwadi yeaudiyo, ezifumana ubukho obuninzi kwiVenkile yokudlala. Enye yezona zinto zibalaseleyo kolu didi iyavakala. Sinenqwaba yeencwadi ezikhoyo kuyo, ngokungathandabuzekiyo ezinokuba zezona zilunge kakhulu ukuba siya eholideyini. Ukudityaniswa kwayo ne-Android Auto kulungile, ngenxa yoko akuyi kubakho ngxaki kule nto.
Ukukhuphela le app simahla. Nangona ukuba sifuna ukuyisebenzisa rhoqo, kuya kufuneka sibhalisele kuyo. Ewe singayizama simahla okwethutyana, ukubona ukuba iyasiqinisekisa na.
Ezivakalayo-Hörbücher & Podcasts
Umthuthukisi: Kuvakala, Inc
I-classic isilindele kwindawo yesithathu, kuba esi sicelo siyinto ebalulekileyo kwi-Android Auto. Inkqubo yokusasaza umculo yaseSweden lolona khetho lufanelekileyo lokufikelela kumculo, Enkosi kwikhathalogu yayo enkulu yomculo. Singamamela iingoma zethu esizithandayo ngelixa siqhuba. Ukongeza ekubeni nakho ukwenza uluhlu lokudlalwayo, ukuze kungabikho nto sinokuyenza, dlala uluhlu oluthiweyo kwaye ke sigxile ekuqhubeni.
Ukukhuphela usetyenziso kusimahla nokudityaniswa kwayo emotweni kulungile. Njengoko sele uyazi, unokufumana i-akhawunti yepremiyamu kwiqonga. Unako kwakhona thatha ithuba ngala maqhinga.
Spotify: Umculo kunye neePodcasts
Umthuthukisi: I-Spotify AB
Eyona nto ixhaphakileyo kukuba ngokungagqibekanga sele sineeMephu zikaGoogle, nangona iWaze sisixhobo esifumana ukuthandwa. Kwakhona, singayisebenzisa endaweni yeMaphu kwi-Android Auto, njengoko besesikubonisile ngomhla wayo. Yisoftware ephucule kakhulu, kwaye imele ulwazi lwayo ngexesha lokwenyani, enkosi kubasebenzisi bayo. Ngale ndlela, siyazi ukuba kuye kwakho ingozi nakweyiphi na indawo, okanye ukuba kukho isiminyaminya. Into eza kusivumela ukuba sihlengahlengise indlela yethu ngalo lonke ixesha, ukuthintela ezi ngxaki endleleni. Kwaye unako thatha ithuba ngala maqhinga.
Ukukhuphela esi sicelo simahla. Nangona sinentengiso ngaphakathi kuyo.
IWaze Navigation kunye neVerkehr
Iiapps zeendaba ziza kancinci kwiAuto Auto. Enye yezo esinokuzisebenzisa namhlanje yinguqulelo yeSpanish ye-NYTimes. Enkosi ngale nguqulo yeapp, sinokufumana ngokulula iindaba zamanye amazwe kwiapp ngalo lonke ixesha. Yiyo loo nto siza kwaziswa malunga nemeko yangoku eyenzekayo kwihlabathi ngalo lonke ixesha. Kulula ukuyisebenzisa, kwaye idityaniswe ngaphandle komthungo nenkqubo yokusebenza.
Ukukhuphela usetyenziso kusimahla. Nangona sineemodeli ezininzi zobhaliso onokukhetha kuzo. Kuya kuxhomekeka ekusetyenzisweni kwakho.
Umthuthukisi: Inkampani yaseNew York Times
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Eyonaapps ilungileyo onokuyisebenzisa kwi-Android Auto
Ungasusa njani i-cache yazo zonke izicelo kwi-Android kwaye ufumane indawo yasimahla